Seychelles waxay ku soo dhaweyneysaa STORY iyo L'Escale xeebaheeda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jabinta Wararka Seychelles » Seychelles waxay ku soo dhaweyneysaa STORY iyo L'Escale xeebaheeda
Jabinta Wararka Seychelles • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
The Jasiiradaha Jasiiradda Seychelles Qaybta raaxada ayaa sii fideysa iyadoo jasiiradda kuleylka ah ee loo socdo ay soo dhaweyneyso STORY (Seychelles) iyo L'Escale Resort Marina & Spa oo ah laba guri oo gaar ah oo ku yaal Mahé.
Waxaa la bilaabay Janaayo 2021, L'Escale Resort Marina & Spa waxay ku taal xeebta waqooyi bari ee Mahe oo ku taal hoteelkii hore ee Wharf ee ku dhow Jasiiradda Eden, iyadoo ku martiqaadeysa booqdayaasha joogitaan heer sare ah hoy hufan, shixnad, cunto karis iyo caafimaad.
Naqshadeynta istuudiyaha Winch Design ee fadhigiisu yahay London, meheraddan cusub ee loo dalxiis tago waxay bixisaa ballanqaad aan dhammaad lahayn oo ah kabo cagaaran oo raaxo leh iyo raaxo ugu dambayn ah oo diyaar u ah inay noqoto meesha ugu habboon ee ay uga baxsadaan dadka safarka ah ee ka imanaya dhammaan dacallada adduunka.
Marka lagu daro qolkeeda martida ee 25 deluxe iyo hudheelka fayoqabka, dalxiisku wuxuu martigeliyaa marina, oo la casriyeeyay si loogu marti qaado martida leh shuruudaha soo dejinta ee Superyachts iyo doonyaha waaweyn.
Dhanka woqooyi ee dhinaca xeebta Beau Vallon xeebteedii hore, H Resort waxay dib ugu magacdartay SHEEKH (Seychelles) waxayna ku dartay deriskeeda, gacaliyaheeda Le Méridien Fisherman's Cove, feylkeeda ilaa iyo 10 Febraayo 2021, XNUMX.
Sida ku cad magaceeda, SHEEKADDA (Seychelles) waxay ku saabsan tahay abuurista 'sheekooyin' martideeda - ma aha oo kaliya inay ku raaxaystaan ​​laakiin sidoo kale inay ka qaybgalaan- inta ay joogaan. Rabitaanka inay u fidiso martideeda khibrad nololeed beddeleysa, dalxiisku wuxuu u abuurayaa khibrado u gaar ah martideeda, iyaga oo siinaya aragti cusub oo ku saabsan safarka.
Marti galinta STORY waxay u adeegi doontaa sidii dalladda waalidku marque u keeni lahayd xulashooyin buuxa xulashooyinka socdaalka iyo booqdayaasha leh laba magac oo huteel oo kala duwan: STORY Hotels & Resorts loogu talagalay khibrad soo booqde sare, iyo sidoo kale CUE Hotels, oo ah qaab nololeed casri ah.
Jasiiradaha Seychelles waxay hadda ku soo dhaweynayaan dalxiisayaasha shuruudo gaar ah, iyadoo la raacayo tilmaamaha amniga oo si joogto ah dib loogu eegayo si loo hubiyo ladnaanta martida iyo dadka deegaanka.
Bandhigga ECCO oo ah sawir dalxiis u gaar ah Rome